Sida loo sameeyo majaajillo | Hal-abuurka Online
Sida loo sameeyo majaajillo
Encarni Arcoya | | Qalabka Naqshadeynta
Haddii aad jeceshahay manga iyo majaajilada, waxaa hubaal ah in mararka qaarkood aad ku dhamaatay fikirka inaad adigu abuuri karto. Laakiin, Sidee loo sameeyaa majaajillo? Ma u fududahay sida ay u dhawaaqi karto?
Munaasabadan, waxaan rabnaa inaan kaa caawinno inaad ogaato waxa ay tahay tillaabooyinka ay tahay inaad qaado si aad u sameyso majaajillo, laakiin sidoo kale aaladaha laga yaabo inaad rabto inaad isticmaasho, haddii aad gacanta ku sameyso ama aad isticmaasho barnaamijyada ama codsiyada internetka si aad u abuurto. Aan samayno?
1 Waa maxay majaajillo
2 Waa maxay tillaabooyinka lagu abuurayo majaajillo
2.1 Fikrad ka hayso
2.2 Horumarinta fikradda
2.3 Waqtiga sawir
3 Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay si aad u samayso majaajillo?
4 Barnaamijyada iyo codsiyada onlaynka ah si loo sameeyo majaajillo
4.6 Sheeko sheeko Taasi
4.9 BDnF, waxaan sameeyay BD
Waa maxay majaajillo
Marka loo eego RAE-da, majaajilada waxaa lagu qeexaa sida "taxane ama isku xigxiga vignettes oo sheegaya sheeko." Si kale haddii loo dhigo, waxaynu odhan karnaa waa bogag taxane ah, kuwaas oo, iyada oo loo marayo tarjumaad, wada hadal iyo odhaah, sheeko garaaf ah ayaa laga sheegay, maadaama ay ugu muhiimsan tahay iyo waxa lagu guuleysto ay tahay qaabka muuqaalka.
Waa maxay tillaabooyinka lagu abuurayo majaajillo
Hadda oo aad si sax ah u ogtahay waxa uu yahay majaajillo, waa waqtigii aad hoos ugu dhigi lahayd ganacsiga. Taasna, waxaa jira tillaabooyin taxane ah oo ay tahay inaad xisaabta ku darsato. Kuwani waa:
Fikrad ka hayso
Waxaan ula jeedaa, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa majaajiladu noqon doonto, ama xariijinta majaajilada. Waxa aad rabto in aad abuurto waa in aad ka fikirto ilaa milimitirka. Tani macnaheedu maaha in hadhow aadan ka bixi karin khadka, liddi ku ah, dhammaan inaad sameyso waa qor fikradda majaajiladaas si aad u horumariso hadhow (script, wadahadal, muuqaal, iwm.). Na rumayso, waxay kaa badbaadin doontaa waqti badan iyo madax xanuun.
Sidan ayaanu hore kuugu sheegnay. Waa inaad ogaataa Nooc noocee ah ayaad u qaabaysan tahay, maxay yihiin ujeedooyinka jilayaasha, deegaanka ay sheekadu ka dhacayso...
Waxaad isticmaali kartaa khiyaamadan: samee majaajillo leh bilow, dhexe (taas oo ah, dhibaato) iyo dhamaadka (xallinta dhibaatadaas). Sidan ayaad doodda ku adkaynaysaa, in kastoo aad u dheerayn karto intaad rabto.
Waxa kale oo muhiim ah in la horumariyo nooca sawirka Maxaad sameyn doontaa, haddii ay noqon doonto qaab kartoon oo badan, manga, style Marvel… dhammaan taasi waxay saameyn doontaa inaad abuuri doonto hal nooc oo vignette ah ama kuwa kale. Tan waxa loo yaqaan qorshaynta waana muhiim in maskaxda lagu hayo. Xitaa adigoo og haddii aad majaajilada ku samaynayso gacanta ama qalab online ah.
Wax yar baa ka hadhay in laga fikiro, waa waqtigii la samayn lahaa in aad sawirto. Waxaa jira farsamooyin qaar oo loogu talagalay jilayaasha, muuqaalka muuqaalka, saamaynta gaarka ah, iwm. Haddii aad taqaan sida loo dabaqo, horay u sii wad. Haddaysan ahayn, waxaa laga yaabaa inaad xoogaa tababarto oo aad bilawdo aaladaha khadka tooska ah.
Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay si aad u samayso majaajillo?
Haddii aad leedahay xoogaa tababar ah oo ku saabsan sawir-qaadista, ama aad ku fiican tahay, waxaad samayn kartaa majaajillo gacanta oo wax walba ka samee meel eber ah. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa qalab taxane ah oo lama huraan ah. Waa kuwee? Kuwa soo socda:
Qalinleyda sawiridda. Waxay yihiin qalimaan gaar ah oo waxaad yeelan doontaa dhibco fiican, dhibic adag, iwm. kaas oo loo isticmaali doono samaynta istaroog kala duwan.
Qalin qalin midab leh. Haddii aad rabto inaad midab siiso majaajiladaada. Ma aha kuwo caan ah maadaama sida caadiga ah kuwan ay yihiin madow iyo caddaan. Noocyada ugu caansan waa Faber Castell, Aquamonolith Cretacolor ama Caran d'Ache.
Dhuxusha. Waa qalabkii ugu horreeyay ee sawir-gacmeedyo lagu sameeyo. Waxa kale oo aad haysataa qalin dhuxul ah oo la heli karo kuwaas oo sameeya saameyn la mid ah.
Calaamadaha koobiga. Kuwo badan ayaa u isticmaala, marka nakhshad qalineedka la soo bandhigo, wax walba ku dul maraan calaamado si aan waxba loo tirtirin.
Barnaamijyada iyo codsiyada onlaynka ah si loo sameeyo majaajillo
Ugu dambeyntii, iyo mar haddii aan ognahay in samaynta majaajilada laga yaabo inaysan u fududayn sidii aad markii hore u malaysay, qalabkan online-ka ah ayaa ku iman kara anfaca sababtoo ah waxay fududeynayaan qayb ka mid ah shaqada ay tahay inaad qabato. Gaar ahaan, waxaan ku talinaynaa kuwan soo socda.
Tani waa mid ka mid ah codsiyada ugu horreeya ee aad isticmaali karto. Dabcan, waa inaad maskaxda ku haysaa taas waxaad samayn doontaa majaajillo adoo isticmaalaya sawiro Flicker ah. Si tan loo sameeyo, waa inaad gasho akoonkaaga Flicker si aad sidaas u samayso.
Appku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku dhejiso xumbo hadalka sawirada si aad u sheegto sheekada.
Pixton maaha qalab bilaash ah, laakiin waxay leedahay nooc bilaash ah oo, haddii aad bilaabayso samaynta majaajilada, waxay ku iman kartaa anfacaya. Caadiyan waa sida ciyaar sababtoo ah maalin kasta 10 halabuur ayaa la doortaa, iyaga oo la socda, waxaad abuuri kartaa majaajillo.
Boggan ayaa kuu ogolaanaya samee majaajillo laakiin sidoo kale ku sawir buugaagta sawirada caadiga ah ee aad haysato.
Waxaa jira saldhig wanaagsan oo ugu fiican oo dhan, waxaad xitaa habeyn kartaa sawiradaas.
Maya, kuma socda waddo qaldan. Marvel waa «Marvel», waa daabacaadda ugu caansan adduunka ee majaajilada iyo wuxuu abuuray madal uu isagu leeyahay si uu u sameeyo majaajillo, si aad u isticmaali karto oo, yaa yaqaan, laga yaabee inay ogaan doonaan waxaad sawirto oo ay soo jeediyaan inaad wax wada qabtaan.
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu dhow majaajilada sababtoo ah wuxuu ku siinayaa jilayaal, habayn, walxo, wada hadal, iwm. si aad isugu dari karto si waafaqsan fikradda aad maskaxda ku hayso.
Maxaad doonaysaa inaad kaaga isticmaasho? Waxaad sidoo kale samayn kartaa.
Sheeko sheeko Taasi
Halkan waxaan kuugu dayn barnaamij kale oo aad ka samayn karto majaajillo. Waa arrin cajiib ah sababtoo ah, inkastoo wuxuu leeyahay nooca bilaashka ah iyo nooca premium (meesha aad ka hesho ilo badan iyo hawlqabadyo), waxay u egtahay majaajillo badan.
Kuwa ugu horreeya waxay si fiican u socon kartaa, gaar ahaan kuwa aan fikrad badan ka haysan sawirka (waa hab lagu arko cabbirrada, sida loo shaqeeyo xaaladaha, iwm.).
Xaaladdan oo kale, waxa aan ugu jecelnahay Creately waa in ay leedahay a tiro badan oo moodallo ah oo kuu oggolaanaya inaad yeelato muuqaallo cajiib ah adiga oo aan laftaadu abuurin. Markaad daabacdo, waxaad daaha ka qaadi kartaa male-awaalkaaga oo waxaad abuuri kartaa muuqaallo la noolaan doono.
Waxaad haysataa ku dhawaad ​​wax walba, majaajillo majaajillo ah, qoraallo, qaabyaal u tacabur ama muuqaal dagaal, iwm.
Canva waxay u noqotay qalab naqshadaysan oo loogu talagalay kuwa aan xirfadlayaasha ahayn ee goobtaas laakiin raba inay abuuraan ilo xirfad leh. Inkasta oo wejigan «manga» aan si fiican loo aqoon, runtu waa taas Waxaad haysataa moodallo bilaash ah oo xitaa waxaad samayn kartaa majaajillo kuu gaar ah oo online ah.
BDnF, waxaan sameeyay BD
Magacan qariibka ah ayaa u dhigma arji ay abuurtay Maktabada Qaranka Faransiiska lafteeda. Ujeeddadiisu waxa ay ahayd in uu u keeno da’yarta qalab si ay u soo saaraan hal-abuurkooda oo ay u abuuraan majaajillo iyo sheeko-gacmeedyo.
Waxa aad ku haysataa oo keliya Ingiriisi iyo Faransiis, laakiin aad bay u fududahay in la isticmaalo. Hadda, sawirradoodu aad uma badna taasina waxay xaddidaysaa isticmaalkooda, laakiin bilawga waxa ay noqon kartaa mid waxtar leh.
Sida aad arki karto, aad bay u fududahay in la sameeyo majaajillo si aad u fikirto fikradda, kobciso maskaxdaada oo aad ka dhigto mid run ah qalabyada qaarkood. Yaa og, malaha waxaad noqon doontaa caan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sida loo sameeyo majaajillo
Sida loo hagaajiyo SEO gudaha Prestasahop
Sida loo sameeyo istiikarada WhatsApp